Finfinnee, Sadaasa 8, 2010 Labsiin Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu sadarkaa biyyaalessaatti hojiitti hiikamaa kan jiru ta’us, itti-fayadama lafaa biyyattii yeroo ammaa waliin wal-qabatee qaawwaaleen kan irratti mul’atan waan ta’eef akka fooyyeffamu ibsame.
Labsiin Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu dursee hojiitti kan hiikame bara 1986tti yoo ta’u, itti-aansuunis fooyya’ee bara 1994 irratti hojiirra ooleera.
Sochii dinagdee biyyattii keessatti keessumaa barbaachisummaan isaa lafa waliin wal-qabate dabaluusaan si’a sadaffaaf irra deebi’ee bara 2004tti fooyyefamuunsaa himameera.
Labsii Lafa Magaalaa ‘Liiziin’ Qabachuu Lakkoofsa 721/2004 waggaa ja’aan dura fooyyeffame kana akka yeroo isa duraa hunda sochiiwwan dinagdee biyyattii saffisaan waan guddateef akkasumas ‘dambiiwwanii’ fi qajeelfamoonni labsicha waliin ba’an rakkoo kan qaban waan ta’aniif fooyyessuun barbaachiseera.
Labsii kana irrattis qaawwaaleen seeraa mudatan fi dhimmoonni seera kanaa ala ta’anii hojiif rakkisaa turan ‘Ministeera’ Misoomaa fi Manneen Magaalaa fi dhaabbilee deggartootaan qorannoon adda ba’anii dhihaataniiru.
Faanaa Biroodkaastiing Korporeet ‘Ministeera’ Misoomaa fi Manneen Magaalaa waliin wal-tumsuun dhimmoota ‘sanada’ wixinee kanaaf galtee ta’an irratti har’a qaamolee qooda fudhattoota waliin wal-tajjii marii geggeesseera.
Waltajjii marii kanaarratti ‘Ministirri’ Misooma Magaalaa fi Manneenii Doktar Ambaachow Mokonnin fooyyeffamuun labsichaa fayyadamummaan haqaa lafaa biyyattiitti akka kabajamu dandeessisa jedhamee akka itti-amaname himaniiru.
Wayita ammaa lafti kan uummataa fi mootummaa waan ta’eef gaaffilee uummataa yero yerootti ka’aniif labsii deebii kennu qopheessuun dirqama ta’a kan jedhan ‘Ministeera’ Misooma Magaalaa fi Manneeniitti Hogganaa ‘Biiroo’ Misooma fi Bulchiinsa Lafaa Obbo Buzu’aalam Admaasuudha.
Sirreeffamuu labsichaaf sababadha kan jedhan qaawwaalee seera, qajeelfamaa fi ‘danbiis’ ibsaniiru.
Kunis labsichi kana dura lafa caal-baasiin dabarfamuuf malee waa’ee lafa ramaddiin dabarfamanii kennamanii qajeelfamaan waanti kaa’e jiraachuu hafuun hojii irratti qaawwaa uumeera jedhan.
Adeemsa caal-baasii ‘liiziin’ namni caal-baasii ba’e irratti hirmaatu tokko caal-baasiiwwan ba’an hundatti al-takkaatti iyyachuu akka danda’u ni-eyyama ture.
Haata’u malee, wixinee haaraa kun namni tokko caal-baasiiwwan ‘liizii’ yeroo wal-fakkaataa keessaa ba’an keessaa filatee tokko qofa akka dorgomu eereera.
Qabiyyeewwan invastimantii ilaalchisees labsicha irratti seerri dirqisiisaan jiraachuu dhibuun hojiif gufuu ta’eera jedhameera.
Karaa biraas keeyyati lafawwan ofiisaanii danda’anii misoomuu hin-dandeenye daangaa nama dhuufaa keessaatti dabaluuf eyyamu labsiitti waan hin-haammatamneef hojimaata irratti rakkoo akka ture wal-tajjiicha irratti ka’eera.
Waajjira ‘ministeerichaatti’ Hogganaan Biiroo Misoomaa fi Bulchiinsaa Obbo Buzu’aalam Admaasuu wixineeen sanadaa kun rakkoolee kanneenii fi isa fakkaataniif deebii kenneera jedhaniiru.
Qaamoleen qooda-fudhattoonni wal-tajjicha irratti himaatanis dhimmoota rakkisoodha, hiikaa gara-garaafis saaxilamoodha jedhan irratti ibsa gaafataniiru.
Labsichi tokkoon tokkoon keeyyataa keesssatti qajeelfamoonni fi ‘danbileen’ kan qophaa’aniif waan ta’eef of-eeggannoon akka fooyya’u eerameera.
‘Ministirri’ Misooma Magaalaa fi Manneenii Doktar Ambaachaw Makonnin gamasaaniin, qajeelfamootni labsicha irratti hundaa’uun ba’an, yaadota ogeeyyii irraa ka’an itti-dabaluun seerota wal-qabatan kaan waliin haala wal hin-faallessineen ni-fooyya’a jedhaniiru.
Saffisa guddina magaalotaan wal-qabatee sirna itti-fayyadama lafaa fooyyessuuf wixineen qophaa’e galteewwan barbaachisoo itti-dabaluun qaamolee isaan ilaallatuun erga ragga’ee booda hojiirra akka ooluuf hundumtuu gaheesaa akka taphatu ‘ministirichi’ gaafataniiru.
Labsii fooyyeffame sadarkaa wixineetti qophaa’e kana irratti dhaabbilee ‘federaalaa’ fi naannoo dhimmisaa isaan ilaallatu akkasumas qooda fudhattoonni irratti mari’atanii mana-maree ‘ministirootaa’ fi Mana-maree Bakka-buutota Uummataaf dhihaatee akka ragga’u eegama. Salamoon Xibabasillaaseetu gabaase.
Afaan hiikuu: Maarituu Galaalchaa (FBC)
More in this category: « Dhaabbilee Barnoota Olaanootti Qaamooleen Baruu fi Barsiisuu Gufachiisan Itti Gaafatamuu jedha Ministeerrii Barnootaa Lammiileen qa’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’an irra jireessi bakka duraatti deebi’uu hin fedhan- qorannaa »
Torbe Kana 10655
Ji'a Kana 77865
01/05/07 irraa eggalee 3062362
Kan Amma Daawwachaa Jiran 16